စိတ်ကူးယဉ်တယ်ပဲပြောပြောယုံကြည်ချက်လို့ပဲဆိုဆိုရွေးချယ်စရာနည်းနေတဲ့ကြား က တော်လှန်ရေး တစ်ခု မှာ ပါဝင်ဖို့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကကျောင်းသား တပ်မတော်ရှိရာကို ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဆိုတာ သပိတ်ကတည်းက အတွဲညီခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံး KIA ရင်း(၆)ကို လမ်းကြောင်းရှာ ထွက်ခဲ့ပြီး သူတွေလေ။ အဆက်အသွယ်လည်း ရထားပြီပေါ့။
တကယ်တမ်းသွားကြမယ်လည်းဆိုရောတစ်ယောက်… တစ်ယောက် ပုတ်ချနေကြရဲ့။
“ပေါသွပ် မင်းမလိုက်သင့်ဘူး။မင်းက အမေအိုကြီးနဲ့ သားအကြီးဆုံး။”
ပါဂျောင်ဒေသ ရက်စွဲတွေမှာတော့သူတို့ဟာ နောင်ရာပါမှာ အပတ်စဉ်(၆)စစ်ရေးသင်တန်းတက်ခဲ့ကြတယ်။
ABSDF(ကချင်)အုပ်စီးထားတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ဟာဘယ်တော့မှABSDF(အထက်ဗမာပြည်) ဖြစ်လာ မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျော်ကျော်ဦးက တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သား(ရင်း-11နယ်မြေ) အောင်မြင့်ထွန်းက တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သား (ရင်း-6 နယ်မြေ) ကျော်ဇင်နဲ့ ဒဿ က ဗန်းမော်တပ်ရင်း ခရိုင်ရုံး
၉၁ ရှစ်လေးလုံး (၃)နှစ်မြောက်အပြီးမှာတော့ သူတို့ အားလုံးဟာထောက်လှမ်းရေးတဲ့။
ဟုတ်သတဲ့၊ အားလုံးတညီတညွတ်ထဲ ဝန်ခံကြသတဲ့။
ABSDF ဗဟိုက သံယောင်လိုက်သုံးတဲ့ သူလျှိုဖော်ထုတ်ပွဲကြီးမှာ
ဗန်းမော်ခရိုင်ရောက်တုံးကင်းတာဝန်ကျတဲ့ မောင်မောင်ကို ရေခပ်ဆင်းတဲ့အကျဉ်းသားဒဿက တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ ခွဲမှူး သက်ထွန်း အကဲခပ်နေတဲ့ကြားက “မောင်မောင် ငါတို့ ကို ထားခဲ့ မင်းပြေးတော့လို့”ရေခပ်ရင်းပြောပေမဲ့သစ္စာ ရှိစွာအဖမ်းခံရင်း ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်ခဲ့....
ဆေးကျောင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးတပ်သားသင်တန်းဆင်းတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတဲ့ ကိုအေးမြင့်က “အမေရေ အမေ့သား ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပြီ”လို့ လှည့် အော်နေတုံး ဖမ်းလိုက်တော့ လဲ ထောက်လှမ်းရေးပါဘဲ-
ခေါင်းအင်မတန်မာတဲ့ ကျော်ဇင် (ခေါင်းမပါဘဲ ပြန်ထောင်ထ မာနိုင်တဲ့ ရန်အောင်ကလွဲရင်)က အဖမ်းခံ ရပြီးချိန် အိမ်သာထွက်ချိန်မှာ သူ့ အသံကိုနားစွင့်ပြီး အတူလိုက်ထွက်လို့ ကျောချင်းဆိုင်ထိုင်ရင်း နှစ် မိနစ်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာ“ငါ့ကို အကုန်လွှဲချ ၊မင်းလွတ်အောင်ရုန်း’’ လို့ ကျွန်တော်ဆိုတော့ နောက် မှသိရတာ လွှဲမချရက်လို့ သူလည်းပါတယ်ဆိုပြီး ထောက်လှမ်းရေးဘဝနဲ့နေခဲ့.....
ဒဿ ကတော့ ကိုထိန်ပြောသလို ဒဏ်ရာအများဆုံးနဲ့လူသားပါပဲ။ တာဝန်ပေးလို့ ရွှေလီကို သံကြိုး နဲ့ နဂ္ဂတစ်သွားဝယ်ပြီး ပြန်ပြန်ချင်း အဖမ်းခံခဲ့ရသတဲ့။
Ok ပြောပြတာက ရေအိုက်မှာ ရေတွင်းလိုစက်သီးတန်းဆင်၊ ခြေထောက်ကဇောက်ထိုးဆွဲ ရေထဲကို မျက်နှာနှစ်ပြီး ခေါင်းကိုနင်းထားတာတောင် ပြန်ပေါ်လာတိုင်း “ကျောင်းသားကွ”လို့အော်သတဲ့။
91 နိုဝင်ဘာလရဲ့ အအေးလှိုင်းဖြတ်ချိန်၊ နှင်းမုန်တိုင်းနဲ့ မိုးသီးတွေကျ၊နှင်းထုက မိုးရွာသလို တစ်ထွာတစ်မိုက်တက်တဲ့ (၁၀)နှစ်တစ်ကြိမ်ကြုံရတဲ့ ရာသီဥတုကြီးမှာ အ၀တ်မပါ ဘောင်းဘီ တိုနဲ့ နှင်းတောထဲပစ်ထားရင်း “ဟ မသေဘူးဟ၊ဆိုပြီး ရေတစ်ပုံးပြီးတစ်ပုံး နာရီဝက်ခြားပြီးလောင်း တာတောင် မသေတဲ့ဖိုးဆန်းကလည်း ထောက်လှမ်းရေးပါ တဲ့။
ပေါသွပ်(ခ)အောင်မြင့်ထွန်းကို တပ်ရင်း(၆) တစ်ညမှာ ဘာမှမေးမနေတော့ပဲ ဗဟိုအမိန့်နဲ့ ညတွင်းချင်း အခုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊သူလိုပါဘဲ ရင်း(၆)အသတ်ခံ တစ်ခြားတစ်ဦးက အိန္ဒိယcampနဲ့ အဆက်အသွယ် ယူပြီးပြန်ရောက်တဲ့ရန်ရှင်း(မြင်းခြံ၊ရေဇင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်း သား) ပါ၊သူ့ ကိုလဲ ညတွင်းချင်း ပါပဲ… သတ်လိုက်ကြပြန်တယ်လေ၊ အော် - ကြယ်ပွင့်တွေကြွေပေါ့။
မောင်မောင်နဲ့ ကိုအေးမြင့်က ပြည်ထောင်စုနေ့ မှာ ခေါင်းပြတ်ရတယ်။
မဟုတ်မခံ မောင်မောင်နဲ့ ပါးစပ်သွက်တဲ့ အေးမြင့်ကိုအရှင်မထားရဲဘူးထင်ပ။
ဘာခန္ဓာကိုယ် ချို့ ယွင်းချက်မရှိ၊ခြေပြတ်လက်ပြတ်မဖြစ်ဘဲ ထည့်သတ်လိုက်တာပေါ့။
ဖြစ်နိုင်ရင် ရဲဘက်အလုပ်စခန်းသုံး စူးကလေး၊ဆောက်ကလေးနဲ့ ကင်းစခန်းတစ်ခုလုံးကိုစီး လိုက်ချင်ပေ မယ့်…
ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့ဖောယောင်ကိုင်းနေသူတွေ၊မိန်းကလေးတွေ၊သံခြေကျင်းမဖြုတ်ရသေး သူတွေကို ငဲ့ပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့ရသတဲ့။
ကိုထိန်ပြောသလိုပါဘဲ၊ပြန်ရောက်လို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်စာပေးစာယူတက်ကြတော့ ကျောင်းသားအရေး တစ်ခုမှာသူတို့ ဟာအခြားမသေသူ ok၊ကံမြင့်ဦး တို့ နဲ့ ပွဲတက်ကြပြန်သတဲ့၊ တယောက်ကတက် တရားဟော လို့ ဝိုင်းဆွဲရသတဲ့…
ABSDFစစ်ဆေးရေး(သို့ )စစ်ကြောရေးဖွဲ့ ပြီးပြန်စစ်တော့မယ်၊ထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ကြောင်း အသိသက်သေ(၂)ဦးရဲ့ထောက်ခံချက် လိုတယ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်သွားတဲ့ ဦးဇင်းကြီးဒဿက ရီနေတယ်။
တခုခက်ရဲ့ ။ ဘယ်မိဘကမှ မယုံရဲ၊မယုံချင် လက်မခံချင်ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက် ။
သူတို့ အတွက် ဆွမ်းမသွတ်ရတာ နှစ် နှစ်ဆယ် ရှိခဲ့ပေါ့ ။ အဲ…တခုတော့ရှိတယ်။ မောင်မောင်ကတော့ အစ္စလာမ်လေ ။
မိသားစုတို့ရဲ့ စိတ်အခံကို အမှန်အမှန်ဆိုပြီး ပွဲမခံရက်ဘူး
I would like to know Who is the person in charge to give order for those execution ? Or which organization ? You should not only remembering victims , also must make public for the names of the coward committed the crime against huminity.